Etazonia dia manakaiky kokoa ny fidirana amin'ny UNWTO miaraka amin'ny delegasiona avo lenta ao amin'ny Executive Council any Baku
Home » Travel Associations News » Etazonia dia manakaiky kokoa ny fidirana amin'ny UNWTO miaraka amin'ny delegasiona avo lenta ao amin'ny Executive Council any Baku
Baku, Azerbaijan, 17 Jona 2019 - Nasongadin'i Etazonia amerikana ny fanohanany ny fizahantany ho mpamily fampandrosoana maharitra. Delegasiona avo lenta avy amin'ny governemanta manatrika ny Birao Mpanatanteraka Fikambanana momba ny fizahan-tany maneran-tany no nanambara fa mikaroka ny mety hiditra ao amin'ny masoivohon'ny ONU tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ny fizahan-tany mahomby sy maharitra ary mora azo i Etazonia.
Ny fivoriana faha-110 an'ny UNWTO Executive Council dia mivory amin'ity herinandro ity any Baku, Azerbaijan, miaraka amin'ireo Firenena mpikambana izay natsangan'ny solontena avy amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina. Tao anatin'ny hetsika izay nankasitrahana fatratra ho mariky ny fanoloran-tenan'i Etazonia ny baikon'ny UNWTO, dia nanaiky ny fanasan'ny sekretera jeneraly Zurab Pololikashvili hanatevin-daharana ny dinika ny firenena. Emma Doyle, Lehiben'ny lefitra voalohan'ny mpiasa ao amin'ny filoham-pirenena amerikana, dia nanambara teo anoloan'ny filankevitra fa "mikaroka ny mety hiditra ao amin'ny World Tourism Organization" i Etazonia, ary nanamarika fa ny fireneny dia manantena ny hiara-hiasa amin'ny UNWTO “Hamporisihana ny fizahantany manerantany.”
Nanonona ny filoha Trump dia nilaza izy fa "Amerika Voalohany dia tsy midika hoe Amerika irery", ary nanampy hoe: "Mino izahay fa misy ny fahafaha-manao goavana ho an'ny UNWTO, miaraka amin'ny fifantohany amin'ny famoronana asa sy ny fanabeazana, ho fanilo fanavaozana ho an'ny fikambanana iraisam-pirenena hafa. . "
Ramatoa Doyle no nitarika ny delegasionina amerikana nankany amin'ny UNWTO Executive Council niaraka tamin'ny masoivoho Kevin E. Moley, sekreteram-panjakana amerikana mpanampy.
Mpikambana mpanorina ao amin'ny UNWTO, Etazonia izao dia iray amin'ireo tsena fizahan-tany lehibe indrindra manerantany, na amin'ny toeran-kaleha izany na amin'ny maha loharanom-pizahantany iraisam-pirenena antsika. Tamin'ny taona 2018, nandray ny mpizahatany maherin'ny 60 tapitrisa ny firenena ary, araka ny lazain'ny UNWTO World Tour Barometer farany teo, nitombo 7% ny sehatry ny fizahan-tany tamin'ny telovolana voalohany tamin'ny taona 2019, raha oharina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taon-dasa.
Ny mpikambana ao amin'ny UNWTO dia niarahaba ny fisian'i Etazonia tamin'ny fivoriana tao Baku ho fankasitrahana ny fitomboan'ny fizahan-tany ny fizahan-tany amin'ny fizotran'ny toekarena manerantany sy ny Agenda ho an'ny fampandrosoana maharitra 2030, ary koa ny faneken'ny mpitondra UNWTO.
Ny Fivoriambe faha-110 an'ny Filankevitra mpanatanteraka dia tonga satria ny UNWTO dia mandalo fotoam-pandaminana lehibe sy fanitsiana. Ny laharam-pahamehan'ny sekretera jeneraly Pololikashvili dia ny fampifanarahana akaiky kokoa ny rafitry ny Firenena Mikambana misimisy kokoa, ny fitoniana ara-bola ary ny fifantohana amin'ny anjara asa fanavaozana, ny fanovana dizitaly ary ny fandraharahana mety ho an'ny sehatry ny fizahantany manerantany.
Airbus dia manambara ny fiaramanidina A330neo voalohany ho an'ny AirAsia
Airbus Services dia mandefa ny "FHS Powered by Skywise"